Date: February 25, 2001Author: Oromedia 1 Comment
(Oromedia, 25 February 2001) Mr. Yonatan Dhibbissa the founder and Central committee of OPDO and the Ministry of Justice for the Oromia region defected on 19 February 2001.
According to sources, Mr Yonatan, who is in his 40s, had stopped in Germany, on transit on his way to attend a convention of MPs in the Caribbean.
One thought on “ The Ministry of Justice for the Oromia region defects”
Daandii Dhaabasaa Hordofaa says:
Hayyee! Baayyee namatti toltu. Akkuma alli keessan suuraa irraa daran bareedu keessi keessanis hanga ani ibsuu danda’uu olitti akka alaabaa fuula keesan dura jiruutti akka bareedu mamii hin qabu.Hayyeegaa nuuf jabaadhaa! Nus biyyuma keessa teenyee akka hantuuta bool’atti galtee taaneetuma ayyanicha kabajanne.Bakka jirtanitti nagaan isinii wajjin naaf haa taatu.
Qabsoon nuuf haa jabaatu! Qabsaa’aan ni kufa, qabsoon itti fufa!
Daandii Dhaabasaa Hordofaa irraa